Allgedo.com » 2010 » December » 16
Home » Archive Daily December 16th, 2010 Xarakada Shabaabul Mujaahidiin iyo Dowladda KMG ah oo guulo ka kala sheegtay dagaalada Muqdisho. Dec 16, 2010 Xarakada Shabaabul Mujaahidiin iyo Dowladda KMG ah ayaa guulo ka kala sheegtay dagaallo culus oo xalay ilaa iyo maanta ka dhacayay degmooyin katirsan magaalada Muqdisho.
Afhayeenka ciidamada Xarakaa Al Shabaab Sheekh Cabdi Caziiz Abuu Muscab oo maanta shir Jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidankoodu guulo ka gaareen dagaaladii xalay ilaa iyo maanta.
Abuu Mucab wuxuu soo... Ciyaaraha Gobolada oo maalintii 2-aad ka socda magaalada Garowe iyo Gobolka Gedo oo ka qeyb gelaya. Dec 16, 2010 Ciyaaraha Kubadda cagta Gobolada dalka Soomaaliya ayaa si habsami leh uga socda magaalada Garowe ee gobolka Nugaal oo uu kajiro maamulka Puntland.
inta badan gobolada dalka Soomaaliya ayaa ka qeyb gelaya kulanka marka laga reebo gobolada Waqooyi Galbeed Somaliya oo aan soo xaadirin xili ciyaareedkan maaaama ay sheegteen in ay Somaliland labexeen oo ay yihiin dal kamadax banaan Somaliya inteeda kale.
Ciyaarta... R/wasaare Farmaajo oo dalka dib ugusoo laabtay. Dec 16, 2010 R/wasaaraha Dowlada KMG ah iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta dib ugusoo laabtay qeybo katirsan magaalada Muqdisho oo ay dowlada KMG ah kataliso.
Wafdiga R/wasaaraha oo saaraa Diyaarad rakaab caadi ah ayaa maanta duhurkii kasoo degay garoonka diyaaraha magaalada Muqdisho waxaana soo gelbiyay taangiyada qafilan ee ciidamada AMISIOM.
Afhayeenka R/wasaaraha Cabdi Xaaji Goob-doon oo saxaafadda lahadlay... Dagaallo Muqdisho ka dhacay iyo Madaafiic Bakaaraha lagu garaacay. Dec 16, 2010 Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo magaalada Muqdisho ku dhaxmaray ciidamada AMISOM iyo xoogaga islaamiyiinta ah ee kasoo horjeeda.
Dagaalada oo ahaa kuwa culus waxay xalay saqdii dhexe ilaa iyo maanta duhurkii ka socdeen wadada shaqaalaha ilaa iyo Isgoyska Dabka halkaasi oo ay labada dhinac rasaas isku dhaafsanayeen.
Hugunka rasaasta iyo maaafiic ay isdhaafsanayeen labada dhinac... Radio Allgedo/ Waraysiyo